lethiri shwe's Page - Myanmar Network
lethiri shwe's Likes
Lethiri shwe's Friends
lethiri shwe's Discussions
Being နဲ့ Doing
Started this discussion. Last reply by lethiri shwe Aug 25, 2012.4Replies6Likes
Being & Doingတကယ်တော့ ဘုန်းကြီးဖြစ်စေချင်တာက ငယ်ငယ်ကတည်းက Being ဆိုတဲ့ တရားအားထုတ်မှူ ကိုလုပ်သွားရင်းနဲ့ Doing ဆိုတဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ လူမှူရေး အလုပ်တွေပါ လုပ်သွားနေရမယ်။ဒီနှစ်ခုကို ခွဲ…Continue
Started this discussion. Last reply by white Jul 14, 2012.3Replies2Likes
သူငယ်ချင်းဆိုတာ သင် ရင်ဖွင့်၊ တိုင်ပင်ဖို့လူလိုတဲ့အခါ သင့်အနားမှာရှိနေပေးသူသူငယ်ချင်းဆိုတာ အားပေးအပွေ့အဖက်လေး သင်လိုအပ်တဲ့အခါ သင့်အနားမှာရှိနေပေးသူသူငယ်ချင်းဆိုတာ မျက်ရည်သုတ်ဖို့ သင်လူလိုတဲ့အခါ…Continue
Started this discussion. Last reply by lethiri shwe Jun 10, 2012.2Replies5Likes
ချစ်ဦးမှာလား . . .ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အကြည်ဆိုက်နေတုန်း ရုတ်တရက်မေးလိုက်တဲ့ သူ့မေးခွန်းကြောင့် တသီတတန်း ကြီး စဉ်းစားမိသွားပါတယ်။“အစ်ကို ညီမ Alzheimer ဖြစ်ရင်ကော အခုလို ချစ်ဦးမှာလား…Continue
Started this discussion. Last reply by 2p6c6hlc4ttvv Jun 10, 2012. 1 Reply 1 Like
" ကိုယ့် ကိုယ်ကို ကောင်း ကောင်းနေကြ၊ ကိုယ့် ကိုသူများကြည့် နေတယ်။ ကိုယ်ကောင်းမှ အားလုံး ကောင်းမယ်။" it means the parents are being watched by their sons and daughters and vice versa, and the teachers…Continue
Yellow Ribbon From 2p6c6hlc4ttvv Pink Ribbon From 2p6c6hlc4ttvv
lethiri shwe's Page
At 9:33 on January 13, 2015,
At 7:26 on October 18, 2012, TAK said…
Hi,friend..Swe ကဗျာလေးက ကောင်းပါ့ အားတက်စရာပေါ့
At 17:38 on August 20, 2012, Myo Myint Kyaw said…
I am Myo Myint Kyaw and Nick name is alinkarrnya (or)nyaalinkarr
So you can call as u like m2k or something. ::P
At 13:57 on July 14, 2012, lethiri shwe said…
At 11:18 on July 8, 2012, kokanhla said…
Thank You Very much for your Comment, Same too You!